Ouhai လေးစားပါတယ်"ပထမ ဦး ဆုံးအရည်အသွေး, အားလုံးထက်ကျော်ကြားမှု" ကျွန်တော်တို့ရဲ့သဘောတရားအဖြစ်,အခမဲ့ဒီဇိုင်းကိုတစ်နေရာတည်းတွင်ပြုလုပ်နိုင်သည့် ၀ န်ဆောင်မှုပေးပြီးဖောက်သည်များနှင့်အရည်အသွေးအာမခံချက်ရှိသောစာချုပ်ကိုချုပ်ဆိုနိုင်သည်,ငါတို့နှင့်အတူသင်၏ကိုယ်ပိုင်အမှတ်တံဆိပ်စိတ်ကြိုက်ရန်အလွန်ကြိုဆိုပါသည်.
Experienced technology & after-sales team, which can help you to solve problems on packaging solution, ဒီဇိုင်း, စသည်တို့. 24h online service,satisfied service could be offered to you at any time. Quick delivery time.5days for customized samples and 10 days for bulk production.Stock samples are free of charge.
ပစ္စည်း Recycled materials zip lock peel off closure custom mailer boxes with custom gold embossed logo
H.S. ကုဒ် 481910000
ပစ္စည်း Kraft စက္ကူ,စက္ကူဘုတ်, အနုပညာစက္ကူ,မြှောင်းပုံဘုတ်အဖွဲ့,စက္ကူ coated, စသည်တို့
အရွယ်အစား(L ကို * W * H ကို) ထုံးစံကိုလက်ခံပါ
အရောင် CMYK litho ပုံနှိပ်ခြင်း, Pantone အရောင်ပုံနှိပ်ခြင်း, သင်၏တောင်းဆိုမှုအဖြစ် Flexo ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်ခရမ်းလွန်ပုံနှိပ်ခြင်း
ထုတ်ယူခြင်းပြီးပြီ Glossy / Matt Varnish, Glossy / Matt Lamination, Gold/silver foil stamping, ခရမ်းလွန်အစက်အပြောက်, ဖောင်း, စသည်တို့.
အသုံးပြုမှု ထုပ်ပိုး, သင်္ဘောဖြင့်ကုန်ပစ္စည်းပို့ခြင်း, စသည်တို့.
ကြာမြင့်ချိန်5နမူနာများအတွက်အလုပ်လုပ်ရက်; 10 အစုလိုက်အပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်မှုအတွက်အလုပ်လုပ်ရက်
QC SGS အောက်တွင်တင်းကြပ်သောအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု, ISO9001 နှင့် Intertek.
အားသာချက် 100% manufacturer with lots of advanced equipment
လက်မှတ် ISO9001, SGS FSC etc.
က 34±2 4.6~4.8mm
ခ 50±2 2.5~2.7mm
ဂ 40±2 3.5~3.7mm
: D 92±2 1.4~1.6mm
ဂ 125 0.5မီလီမီတာ
ထုပ်ပိုး:Standard export packaging,or customized packing as your require
2.Trade term: EXW,FOB.CIF,စသည်တို့
3.ငွေပေးချေမှုသက်တမ်း: 50% deposit before production,50% balance before ship the goods
4.ပို့ဆောင်ချိန်: 15-20 working days after confirm the order
5.ထုပ်ပိုး: standard export packaging
8.နမူနာအချိန်: about 3-5 ရက်ပေါင်း